मावलामा एक रुपियाँ ढ्याक दक्षिणा पाउँदा दंग परिन्थ्यो : डा. बाबुराम भट्टराई Gorkha Samachar
२१ आश्विन २०७६, मंगलवार , प्रकाशीत
दशैं आयो । कसरी मनाउने योजना गर्नुभएको छ दशैंलाई ?
दशैंमा त दक्षिणा पनि पाइन्थ्यो । बाल्यकालमा त्यस्तो दक्षिणा पाउँदा चाहिँ कस्तो अनुभूति हुन्थ्यो ?
त्यो पैसा कसरी खर्च गर्नुहुन्थ्यो ?
सबैभन्दा बढी दक्षिणा चाहिँ कसले दिनुहुन्थ्यो ?
दशैंको कुनै दुःखान्त अनुभव चाहिँ छ कि छैन ?
हिजो जनयुद्धकालको नेतृत्वकर्ताहरुमध्येका एक तपाईं । तपाईंहरुमाथि त चाडपर्व,दशैं मनाउन नदिएको बात पनि लाग्ने गरेको छ नि ! मैले नैतिक ढंगले जिम्मा लिनुपर्छ तर व्यक्तिगत रुपमा म कहिल्यै पनि त्यसको पक्षमा थिइनँ ।
भूमिगतकालमा जनताको घरमा शरण लिँदा दशैंमा तपाईंहरुलाई टीका लगाइदिने काम हुन्थ्यो ?
तर तपाईंमाथि त धर्मविरोधी भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ नि !
तपाईं त अन्तरजातीय विवाह गरेको मानिस ! तपाईंको आफ्नो घरको दशैं संस्कार र श्रीमातीको घरतर्फको दशैं मनाउने तरिका र संस्कारमा के समानता,के भिन्नताहरु पाउनुभो ?